Kulan looga hadlay qiimo dhaca lacagta Somaliland
HARGEYSA: Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed (Siilaanyo) ayaa maanta dhammaanba xubnaha xukuumaddiisa qasriga madaxtooyada kulan kula yeeshay, waxana kulankaas lagu lafo guray sidii xal waara loogu heli lahaa hoos ud haca muddooyinkii ugu dambeeyey ku imanayey qiimaha Shilinka Somaliland.
Kulankan oo goob joog ka ahaayeen xubnaha golaha wasiirrada, agaasimeyaasha guud, gudoomiyeyaasha hay’addaha madaxa Banaan, Maareeyeyaasha, Taliyeyaasha Ciidamada ee kala duwan ayaa waxaa laga soo saaray qoddobo dhawr ah oo uu warbaahinta u akhriyey wasiirka madaxtooyada Somaliland.
“xukuumad ahaan waxanu garwaaqsanay oo aan meelmarin doonaa hufnaanta iyo nidaamka dibu habaynta maaliyadda Somalaildn, xeerarkoodiina dhammaan golaha wakiillada bay hor yaalaan, kuwaas oo kalsooni gelinaya in muwaadiniintu aragto sida hantidoodu u socoto. Waxanu samayn doonaa wacyigelin joogta oo aanu bulshada ugu sheegeyno inay lacagtooda isticmaalaan, Somalaialnd waxa ay halkaan kusoo gaartey isku tashi, awoodaha Bangiga dhexena waanu xoojin doonaa.”ayuu yirii Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi.
Somalailand ayaa waxaa la soo gudboonaadey qiima dhac ku yimid lacagta Shilinka taasoo saameyn dhaqaale ku yeelatey bulshada gaar ahana kuwooda danyarta ah.